/Blog/Avanafil/I-Avanafil powder Ukuthelekiswa ne-Viagra kunye ne-Cialis powder ye-Treatment ED
ezaposwa ngomhla 04 / 11 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Avanafil.
Yonke into malunga neAvanafil powder
1.Yintoni i-Avanafil powder?
2.Yintoni i-Avanafil powder?
3.I-powder Avanafil isebenza njani?
4.Usebenzisa njani i-Avanafil powder?
5.Isilinganiselo se-Avanafil powder
6.Ukwazisa nge-Avanafil powder
7.Iziphi iimpembelelo ezingasetyenziswayo ze-Avanafil powder?
I-8.Avanafil powder Ukuthelekiswa ne-Viagra kunye ne-Cialis powder ye-Treatment ED
I-9.Kukhawuleza njani Ngaba iiDrugs ziSebenza?
I-10.Ixesha elide Ngaba iiDrugs zeDD zokugqibela?
11. Iimiphumo ezingezantsi zeDD izidakamizwa
I-12.Iziphumo eziphambili zeeDD
13.Izixwayiso malunga neeDrugs ze-ED
14.Izibonelelo zokuthenga i-Avanafil powder ukusuka ku-AAS Umthengisi we-powder Avanafil:
Avanafil powder ividiyo
I. I-Avanafil i-powder powder Isiseko:
igama: Avanafil powder
I-molecular Formula: C23H26ClN7O3
Isisindo somzimba: 483.95
Avanafil isetyenziselwa ukuphatha abantu abane-erectile disys function (ebizwa ngokuba yi-sex impotence). I-Avanafil powder yile iqela lamayeza ebizwa ngokuba yi-phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitors. La mayeza akhusela i-enzyme ebizwa ngokuba yi-phosphodiesterase hlobo-5 ekusebenzeni ngokukhawuleza. I-penis yenye yeendawo apho le enzyme isebenza khona.
I-Erectile i-dysfunction yimeko apho ipenisi ayinzima kwaye yandisa xa umntu evuyiswa ngokwesondo, okanye xa engakwazi ukugcina ulungiso. Xa indoda ishukunyiswa ngesondo, umzimba wakhe uphendule ngokuqhelekileyo ukunyuka kwegazi kwi-penis yakhe ukuvelisa i-erection. Ngokulawula i-enzyme, i-Avanafil powder inceda ukugcina i-erection emva kokuba ipenisi iqhutywe ngokunyuka kwegazi kwi-penis. Ngaphandle kwesenzo somzimba kwi-penis, njengaleyo eyenzeka ngexesha lokwabelana ngesondo, i-Avanafil powder ayiyi kusebenza ukwenza i-erection.
2.Yintoni Avanafil powder?
I-Avanafil ipowder powder eluhlaza, impahla ye-Avanafil powder, uhlobo lwe-White powder, umthengisi wezinto ezininzi ze-steroids ngokuqhelekileyo uthenge u-Avanafil powder kwi-intanethi, yenza ukuba zonke iintlobo ze-brand zigqityiwe i-Avanafil powder, iinkcukacha ze-Avanafil powder ekhutshwe kwi-AAS njengezantsi:
I-Formula ye-molecular: C23H26ClN7O3
I-Melt Point: 150-152 ° C
Isitampu Sokugcina: RT
3.Iyintoni Avanafil powder Imisebenzi?
Avanafil lomgubo kwiklasi amayeza ekuthiwa phosphodiesterase (PDE) inhibitors.It isetyenziselwa ukunyanga erectile kwekhono (ED: namandla; ukungakwazi ukufumana okanye ukugcina akuvuki emadodeni). Lo mkhiqizo wokuphucula umntu ufumana igama lakhe kwisithako saso esisebenzayo esinceda ukujikeleza kwegazi emzimbeni ngendlela eqhelekileyo. Kukho ezinye izithako ezenza u-Avanafil usebenzise kakuhle kodwa akanalo mpe mbelelo enkulu kunye nemiphumo eyona isithako esiyintloko.
Isebenza ngokunyusa ukuhamba kwegazi kwi-penis ngexesha lokuvuselela ngokwesondo. Oku kunyuka kwegazi kungabangela ukulungiswa. I-Avanafil powder ayiphilisi i-erectile disysction okanye yandisa umnqweno wesini. I-Avanafil powder ayikuthinteli ukukhulelwa okanye ukusasazeka kwezifo ezithathelwana ngocansi ezifana ne-virus immunodeficiency virus (HIV).
I-Avanafil powder isilwanyana esisemthethweni esisetyenziselwa ukuphathwa kakubi (ukungakwazi ukufumana okanye ukugcina ukulungiswa kwe-penile), eyaziwa nangokuthi i-erectile disys function (ED). Kudidi lwezilwanyana ezibizwa ngokuba yi-phosphodiesterase inhibitors ezibandakanya i-tadalafil (i-Cialis powder), i-sildenafil (i-Viagra) ne-vardenafil (i-Levitra). Ukulungiswa kwepenisi kubangelwa ukuzaliswa kwepenisi ngegazi. Ukuzaliswa kwenzeka ngenxa yokuba imithwalo yegazi eyenza igazi kwi-penis yanda ngobukhulu kwaye ihambisa igazi elingakumbi kwi-penis, kwaye, ngexesha elifanayo, imithwalo yegazi ethatha igazi kude ne-penis yehla ngobukhulu kwaye isuse igazi elingaphantsi kwidoda . Ukuvuselelwa ngokwesondo okukhokelela ekwakheni kubangela ukuveliswa kunye nokukhululwa kwe-nitric oxide e-penis. I-nitric oxide yenza i-enzyme, i-guanylate cyclase, ukuvelisa i-guanosine monophosphate (cGMP). Yiyo i-cGMP ebaluleke kakhulu ekunyuseni nasekunciphiseni ubukhulu beemithwalo zegazi ezithwala igazi ukuya kwi-penis, ngokulandelanayo, nokudala ukulungiswa. Xa i-cGMP ibhujiswe enye i-enzyme, i-phosphodiesterase-5, imirhupha yegazi ibuyela kubukhulu bayo obuqhelekileyo, igazi liphuma kwipenisi, kwaye i-erection iphela. I-Avanafil powder ivimbela i-phosphodiesterase-5 ekubhubhiseni i-cGMP ukuze i-cGMP ihlale ihlala ixesha elide. Ukuphikelela kwe-cGMP kukhokelela kwi-engorgement eyongezelelekileyo ye-penis ngegazi. I-Avanafil powder ivunyiwe yi-FDA ngo-Ephreli 2012.
4 Sebenzisa iAvanafil powder?
Ngaphambi kokuthatha i-Avanafil powder
xelela ugqirha wakho kunye nekhemisti ukuba unobungozi ku-Avanafil powder, nayiphina imithi, okanye nayiphi na isithako kwiiphilisi ze-Avanafil. Buza i-pharmist yakho okanye ukhangele ulwazi lwesigulane uluhlu lwezithako.
Musa ukuthatha Avanafil umgubo ukuba uthatha okanye kutshanje baye riociguat (Adempas) okanye nitrate ezifana isosorbide dinitrate (Dilatrate-SR, Isordil, e BiDil), isosorbide mononitrate (Monoket), kunye nitroglycerin (Minitran, Nitro-Zibon, Nitromist , I-Nitrostat, abanye). Ama-nitrate afika njengetyebhelethi, iilwimi ezingaphantsi (phantsi kweelwimi) iipilisi, iiprafu, iifatches, i-pastes, kunye namafutha. Buza ugqirha wakho ukuba awuqinisekanga ukuba nayiphi na imithi yakho iqukethe i-nitrate.
Musa ukuthatha izidakamizwa zesitrato eziqukethe iitrates ezifana ne-amyl nitrate kunye ne-nitrate ye-butyl ('poppers') ngelixa uthatha i-Avanafil powder.
Tshela ugqirha wakho kunye nekhemistiya ukuba yintoni enye imithi yokugulisa imithi kunye neyengabonakaliyo, iivithamini, izongezelelo zondlobo kunye nemveliso yemveliso oyithathayo okanye uceba ukuyithatha. Qinisekisa ukukhankanya naluphi na olu lulandelayo: ii-block blockers ezifana ne-alfuzosin (i-uroxatral), i-doxazosin (i-Cardura), i-prazosin (i-Minipress), i-tamsulosin (i-Flomax, kwi-Jalyn), i-silodosin (iRafaflo) kunye ne-terazosin; imithi ethile ye-antitifungal efana ne-fluconazole (Diflucan), i-itraconazole (i-Onmel, i-Sporanox) kunye ne-ketoconazole (i-Nizoral); i-aprepitant (i-Emend); i-clarithromycin (i-Biaxin, kwi-Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); I-HIV protease inhibitors njenge-atazanavir (Reyataz, eVotaz), i-fosamprenavir (Lexiva), i-indinavir (i-Crixivan), i-nelfinavir (iViracept), i-ritonavir (i-Norvir, e-Kaletra), kunye ne-saquinavir (i-Invirase); amanye amayeza okanye unyango lwe-erectile dysfunction; unyango lwegazi eliphezulu; nefazodone; i-verapamil (Calan, Covera, Verelan, abanye); kunye ne-telithromycin (Ketek). Ugqirha wakho unokufuna ukutshintsha amanyathelo akho amayeza okanye ukubeka iliso ngononophelo kwimiphumo emibi. Ezinye iziyeza zingaphinde zisebenze kunye ne-Avanafil powder, ngoko qiniseka ukuba uxelele ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza owathathayo, kunye nalawo angabonakali kuloluhlu.
xelela ugqirha ukuba ngaba uke wachazwa ngugqirha ukuba ugweme umsebenzi wesondo ngenxa yezizathu zonyango, ukuba uye wahlinzwa intliziyo kwiinyanga ezidlulileyo ze-6 kwaye ukuba unakho ulungiso olude ixesha elide kuneeyure ze-4. Kwakhona xelela ugqirha ukuba ngaba unayo okanye uke waba neemeko ezichaphazela umlo wepensi njengengxolo, i-cavernosal fibrosis, okanye isifo sePyrononi; ukuhlasela kwentliziyo; ukubetha; intliziyo engavumelekanga; umthamo ovalwe; i-angina (intlungu yesifuba); uxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye oluphantsi; ukumelwa yintliziyo; iingxaki zeseli zegazi ezifana nesifo segazi lesigulo (isifo seeseli ezibomvu zegazi), i-myeloma yamaninzi (umhlaza wamaseli e-plasma), okanye i-leukemia (umhlaza weeseli zegazi ezimhlophe); zilonda; i ingxaki; okanye isibindi okanye isifo sesifo. Kwakhona xelela ugqirha wakho ukuba une okanye wakha retinitis pigmentosa (a isifo eye ezinqabileyo ilifa) okanye ukuba une ukhe kakhulu ilahleko umbono, ingakumbi xa baxelelwa ukuba ilahleko mbono kwabangelwa ukuvaleka yokumpompoza kwegazi ukuya luvo ekunceda ubone.
Kufuneka ukwazi ukuba i-Avanafil powder isetyenziswe kuphela kwindoda. Abasetyhini akufanele bathathe i-Avanafil powder, ngokukodwa ukuba ngaba okanye bayakhulelwa okanye bancelise. Ukuba umfazi okhulelweyo uthatha i-Avanafil powder, kufuneka acele udokotela wakhe.
uthetha ugqirha malunga nokusetyenziswa okukhuselekileyo kotywala ngexesha lokunyanga nge-Avanafil powder. Ukuba usela isiselo esininzi sotywala (ngaphezulu kweeklasi ezintathu zewayini okanye i-whisky ezintathu) ngelixa uthatha i-Avanafil powder ufumaneke iziphumo ezithile ze-Avanafil powder ezifana nokutywabalala, intloko, ukunyaniseka kwentliziyo kunye ifuthe legazi.
Ukuba utyunjwa, kuquka nokuhlinzwa kwamazinyo, xelela udokotela okanye wamazinyo ukuba uthatha i-Avanafil powder.
Kufuneka uyazi ukuba umsebenzi wesondo ungabangela intliziyo yakho, ngakumbi ukuba unesifo senhliziyo. Ukuba unesihlungu esifubeni, utywala, okanye isicasulce ngexesha lokwebelana ngesondo, khawuncede ugqirha ugqirha wakho ngokukhawuleza uze ugweme ukwenza umsebenzi wezesondo ade ugqirha wakho akuxelele ngenye indlela.
xelela bonke ababonelela ngempilo ukuba uthatha i-Avanafil powder. Ukuba unokwenza unyango lwezonyango lwengxakeko ngenxa yengxaki yenhliziyo, ababoneleli bezempilo abakuphathekayo baya kufuneka bazi ukuba ugcine ukuthatha i-Avanafil powder.
Ngexa uthabatha u-Avanafil powder
Umele ukwazi oku ngelixa uthabatha u-Avanafil powder
Gwema ukuqhuba nokuqhuba eminye imisebenzi okanye izenzo ezenza ukuba uqaphele uze ubone indlela i-Avanafil powder ikuchaphazela ngayo.
Ingxaki yamehlo embi kakhulu ayizange ivele nge-Avanafil powder. Oku kungakhokelela ekutshintsheni kwamehlo kwaye maxa wambi ukulahlekelwa kwamehlo, okungenakubuya. Thetha nogqirha.
Emva kokuba uthathe i-Avanafil powder
Amachiza angenagunya kufuneka alahlwe ngendlela ezizodwa zokuqinisekisa ukuba izilwanyana, abantwana kunye nabanye abantu abanakuzidla. Nangona kunjalo, akufanele uhlalutye le mayeza kwizindlu zangasese. Kunoko, indlela efanelekileyo yokulahla amayeza akho ngeprogram yokubuyisela iyeza. Thetha kumakhomistiki okanye qhagamshelana nomnyango wendawo yokulahla / uhlaziyo kwakhona ukuze ufunde malunga neenkqubo zokubuyisela kuluntu.
5.Isistim Avanafil powder
Ifomu yesimo somlomo (amacwecwe):
I-Avanafil powder iza njengetyulethi ukuthatha ngomlomo. Kuba amadoda athatha i-100- mg okanye i-200-mg, i-Avanafil powder idlalwa kunye okanye ngaphandle kokutya njengoko kuyimfuneko, malunga nemizuzu eyi-15 phambi komsebenzi wesondo, akukho ngaphezu kweyodwa ngosuku.
Amadoda athatha umthamo we-50-mg, i-Avanafil powder idlalwa kunye okanye ngaphandle kokutya njengoko kuyimfuneko, malunga nemizuzu ye-30 ngaphambi komsebenzi wesondo. Musa ukuthatha i-Avanafil powder kaninzi ngaphezu kwesinye kwiiyure ze-24.
Ukusetyenziswa kwabantwana akukhuthazwa.
I dose yeliyeza lizahlukahlukileyo kwizigulane ezahlukeneyo. Landela imiyalelo yegqirha okanye izikhokelo zelebula. Ulwazi olulandelayo luquka kuphela amanani athile ale mayeza. Ukuba umthamo wakho uhlukile, ungatshintshi ngaphandle kokuba ugqirha wakho akuxelela ukuba wenze njalo.
Inani lemali oyithathayo lixhomekeke kumandla oliyeza. Kwakhona, inani lamanani othabathayo ngosuku, ixesha elivunyelwe phakathi kwamanani, kunye nobude bexesha othabatha amayeza lithembele kwingxaki yonyango osebenzisa ngayo iyeza.
Imiba enxulumene nemiphumo emibi:
Ukucwaswa kombala: Kungabangela ukuphazamiseka komnxeba wokubandlululwa kombala. Sebenzisa ulumkiso kwizigulane ezine-retinitis pigmentosa; iincinci zineengxaki zofuzo ze-retinal phosphodiesterase (akukho nkcukacha zokhuseleko ezikhoyo).
• Ukuvahleka kokulahleka: Ukunciphisa ngokukhawuleza okanye ukulahlekelwa kwindlebe kuye kwabikwa ngokukhawuleza; Ukutshintsha kweendlebe kunokuhamba kunye ne-tinnitus kunye nesisu. Ulwalamano oluchanekileyo phakathi kwonyango kunye nokulahlekelwa kwindlebe akuzange kubekwe.
• I-hypotension: Ukuncipha kwengcinezelo yegazi kungenzeka ngenxa yeempembelelo ze-vasodilator; sebenzisa ngokulumkisa kwizigulane ezithintela ukukhutshwa kwe-ventricular outflow (aortic stenosis okanye i-hypertrophic obstructive cardiomyopathy); unokuba novalo kwizenzo ze-hypotensive. Ukusetyenziswa ngokufanayo kunye ne-alpha-adrenergic ntsholongwane yonyango ingabangela ukuxhomekeka komzimba; izigulane kufuneka zihlale zizinzileyo ngaphambi kokuqalisa unyango kwiqondo eliphantsi kakhulu. Izigulane kufuneka ziphephe okanye zinciphise ukusetyenziswa kwe-ethanol ngokukhawuleza njengoko oku kunokwandisa umngcipheko wokuxhomekeka kweempawu.
• Ukuzikhethela: Ukulungiswa kabuhlungu> Iiyure ze-6 ngexesha libikwe (ngokungaqhelekanga). Qalisa izigulane ukuba zifune unyango lwangokokukhawuleza ukuba ulungiso luyaqhubeka> iiyure ze-4. Sebenzisa ngokugulisa kwizigulane ezinemiqathango enokubakhokelela ekuthineni (i-sickle cell anemia, i-myeloma yam, i-leukemia).
7.Iyintoni enokwenzeka Imiphumela Avanafil powder?
Yiyiphi imiphumo emibi eyenza le myeza ibangele?
I-Avanafil powder ingabangela iziphumo zecala. Tshela ugqirha wakho ukuba nayiphi na le mpawu iyanzima okanye ungahambi:
ukulungiswa okuhlala ixesha elide kuneeyure ze-4
ukulahleka kwangoko kwembono kwelinye okanye zombini amehlo (bona ngaphantsi ngolwazi olungakumbi)
ukulahlekelwa kwintetho ngokukhawuleza (jonga ngezantsi ukuze uthole ulwazi oluninzi)
I-Avanafil powder ingabangela ezinye iziphumo ezibi. Biza ugqirha wakho ukuba unayo nayiphi na ingxaki engaqhelekanga xa usebenzisa le mayeza.
Ukuba unobungozi be-erectile kwaye ukhangele i-Avanafil powder ngokuthelekiswa ne-Viagra kunye ne-Cialis powder uze ufunde. Ukuba uphakathi uqikelelo zamadoda 30 eUnited States abafumana erectile kwekhono kwaye ufuna ukuthatha omnye amachiza erectile kwekhono, imvume yakutshanje Avanafil powder yi-Food and Drug Administration (FDA) kuthetha ukuba ngoku une amachiza amathathu apho ukhetha khona. Ngaba i-Avanafil i-powder yakho iyona nto ikhethekileyo kuba iyona mveliso entsha? U-Avanafil powder ufanisa njani namanye amachiza e-erectile dysfunction? Kwaye kubaluleke kakhulu, indlela ephumelelayo ngayo i-Avanafil powder iqhathaniswa neViagra kunye nePacalis powder?
Iinqununu ezinhlanu ze-Erectile Dysfunction
Izidakamizwa ezintlanu ezivunyiweyo ze-FDA erectile dysfunction kwimarike yiAvanafil powder (Stendra), sildenafil (), tadalafil (), kunye (nobabini no-Levitra no-Staxyn, uhlobo lomthetho lokupheliswa kweLevrara). Zonke ezi ziyobisi zikwiklasi enye yeziyobisi ezaziwa ngokuba zi-phosphodiesterase (PDE) inhibitors kuba zonke zisebenza ngokuthintela uhlobo lwe-enosme phosphodiesterase uhlobo lwe-5 (PDE-5).
Xa i-PDE-5 ivaliwe, oku kwandisa ukuphuma kwegazi kwi-penis, leyo eya kuthi, kwiimeko ezininzi, iholele ukulungiswa. Sithetha "amaninzi amatyala" kuba ukusetyenziswa kwezidakamizwa zantlanu zifana, kuxhomekeke kwiqondo eliyithathiweyo, kunye ne-77% ukuya kwi-84%.
I-Avanafil powder ye-Erectile Dysfunction
Ngenxa yokuba i-Avanafil powder iyongezelelo elitsha kwi-arsenal ye-erectile i-dysfunction drugs, makhe sijonge phambili phambi kokuba sithelekise nezinye izidakamizwa ze-ED. Kwizilingo zekliniki, ngokubanzi i-77% yabesilisa abane-general erectile dysfunction abathi bathatha i-Avanafil powder bafumana ukulungiswa ngokumalunga ne-54% yamadoda athatha indawo. Phakathi kwamadoda ane-erectile i-dysfunction ehlobene nesifo sikashukela, i-63% iphumelele ukulungiswa emva kokuthatha i-Avanafil powder ngokuthelekiswa ne-42% eyayithatha indawo.
Makhe sijonge kwiziphumo zenye i-12 yeveki yeSigaba seSigqibo III ngokukodwa. Inani elipheleleyo lamadoda akwa-646 ayenzelwe ngokulandelelana ukuthatha i-50, i-100, okanye i-200 mg ye-Avanafil ngemini ye-30 imizuzu ngaphambi kokuqalisa umsebenzi wesondo. Kwakungabikho mingcipheko ekudleni okanye ekusetyenzisweni kotywala. Kwimizamo yezesondo ze-300 ezenziwe ngethuba lokufunda, i-64% ukuya kwi-71% yaphumelela phakathi kwamadoda athatha i-Avanafil powder xa kuthelekiswa ne-27% phakathi kwamadoda athatha indawo. Ezinye iindaba ezilungileyo: 59% ukuya kwi-83% yeenzame ze-80 kwisondo zobudlelwane bezesondo ezenziwe ngaphezu kweeyure ze-6 emva kokuthatha i-Avanafil powder zaphumelela xa kuthelekiswa nemizamo ye-25% ephumelelayo kumadoda athathe indawo. Kwamanye amadoda, u-Avanafil powder wasebenza kancinci njengemizuzu ye-15. (Goldstein 2012)
Enyanisweni, into enye eyahlula i-Avanafil powder ukusuka kwezinye izidakamizwa ezine ze-ED yindlela esheshayo isebenza ngayo. UGqr Wayne Hellstrom, unjingalwazi nomchamo e Tulane University School of Medicine eNew Orleans, kuchaziwe kwinqaku Reuters ukuba Avanafil lomgubo "lingaba ibamba fastest amane," njengoko ulingo lwezonyango lubonakalise ukuba unako ukusebenza ngokukhawuleza njengoko imizuzu 15 . Nangona kunjalo, kukho iingxelo zeCialis powder esebenzayo malunga nemizuzu ye-15.
Ezinye izidakamizwa ze-erectile zisebenza ngokukhawuleza kunabanye, kwaye ukutya kungabangela inxaxheba (i-Avanafil powder Ukuthelekiswa ne-Viagra kunye ne-Cialis powder):
I-Cialis powder: I-15 kumzuzu we-45, ukutya akukho mpembelelo
I-Levitra ne-Staxyn: imizuzu ye-25, kodwa inokulibaziseka xa kuthathwa isidlo esinamafutha
I-Avanafil powder: Imizuzu ye-30, ukutya akukholelwa ukuba kunemiphumo
I-Viagra: Imizuzu ye-30, kodwa inokulibaziseka xa kuthathwa ngokutya
I-10.Ixesha elide Ngaba iiDrugs zeDD zokugqibela? (I-Avanafil powder Ukuthelekiswa neViagra kunye ne-Cialis powder)
Izidakamizwa ze-erectile zokusebenzisa izidakamizwa ziyahluka njani ukuba umntu angalindela ixesha elingakanani ukukwazi ukuphumeza ukulungiswa. Ixesha langoku liyakwazi ukuhluka, kuxhomekeke kwidayithathi ethathwe kunye nezinye izinto
I-Cialis powder: iiyure ze-36
I-Levitra ne-Staxyn: i-4 kwiiyure ze-5
I-Avanafil powder: ngaphezu kweeyure ze-6 kwezinye izigulane
I-Viagra: 4 kwiiyure ze-5
I-11.Iziphumo zeDD izidakamizwa
Nangona iziphumo ezichaphazelekayo ezibandakanya zonke izidakamizwa ze-ED zifana noko, kukho ukungafani okubalulekileyo kubanye amadoda.
I-Cialis powder: Ininzi eqhelekileyo yintloko kunye nokunyanzelisa. Okungaqhelekanga ubuhlungu bubuhlungu, ukuxakeka, ukuxhamla ubuso, iintlungu zomzimba, ukudibanisa kwamanzi.
I-Levitra kunye ne-Staxyn: Iyona nto iqhelekileyo ibhuqa ubuso kunye nentloko. Okungaqhelekanga ukuxakeka, ukunyanzeliswa, ukuxininiseka kwesisu, isicupunu.
I-Avanafil powder: Ixhaphaka kakhulu, iyabetha intloko, inxinano yamanzi, kunye neempumlo. Okungaqhelekiyo iintlungu ezibuhlungu, isifo sohudo, isisu, isifo soxinzelelo, umkhuhlane, ama-muscle aches, kunye nokusuleleka kwintsholongwane yokuphefumula.
I-Viagra: Eyona nto ixhaphakileyo yintlungu, isifo sekhanda, ukunyanzelisa. Okungaqhelekanga kuguqulwe umbono, uhudo, isisu, ukuxinana kwamanzi, ukuxhamla, kunye nokusuleleka kwe-urinary tract tract.
Zonke izilwanyana ezi-5 ze-erectile ezingasebenzi zingabangela imiphumo engabonakaliyo emibi ebandakanya ukulahleka kweso siphene kweso okanye zombini amehlo, ukulahlekelwa ngokukhawuleza kokuvalelwa kwelinye okanye kwiindlebe zombini, kunye nokuguquka kombala. Ukuba ufumana nayiphi na imiphumo yecala, qha ga mshelana nomboneleli wakho wezempilo.
Olunye umphumo wesiganeko ongenabunqwenelekayo, okanye i-4 i-hour erection. Amadoda afumana ukulungiswa okuhlala iiyure ze-4 okanye ixesha elide kufuneka bafune unyango lwangonyango.
Ngaphambi kokuba uthathe i-Avanafil powder okanye nayiphina imichiza ye-ED, kufuneka uxelele umboneleli wakho wezempilo ngoncedo lweemithi kunye nezongezelelo ozithathayo, kokubhaliweyo kunye ne-counter-counter-counter. Oku kubaluleke ngakumbi ukuba uthatha i-nitrate, kuba ukudibanisa kungabangela ukukhawuleza, kwehla ngokukhawuleza kwixinzelelo legazi. Kufuneka uxelele ugqirha wakho ukuba unakho na oku okulandelayo:
Iingxaki zeentliziyo, ezifana nokuhlaselwa kwentliziyo, i-angina, ukungaphumeleli kwentliziyo, ukunyaniseka kwentliziyo
Ukuhlinzwa kwentliziyo kwiinyanga ezidlulileyo ze-6
Uxinzelelo oluphantsi okanye oluphezulu lwegazi
Isifo se Peyronie
Isifo segazi, njenge-myeloma, i-leukemia, i-sickle cell anemia
I-Retinitis pigmentosa (isifo seso somzimba)
Naziphi na ezinye iimeko zonyango
Amadoda ane-erectile dysfunction aneentlobo ezahlukeneyo zezidakamizwa zomlomo ezingabancedisa ukulawula lesi sifo. Ezinye iindlela zokunonyango ezingenokwenzeka ziquka iipompo zamadoda, iifometer, iilenjini ze-penile, iziplani ze-penile, ukucebisa, kunye neendlela zendalo. Ngaphambi kokuba uqalise nayiphi na uhlobo lwe-erectile unyango lokungasebenzi, amadoda kufuneka ahlaziye zonke iinketho zabo aze axoxe ngazo nomniki-nkonzo onolwazi.
14.Izinzuzo ukuthenga i-Avanafil powder evela kumthengisi we-AAS Avanafil powder:
I-1.Ikhwalithi ephezulu ngexabiso elikhuphisanayo:
2.Fast kunye nokuKhuselwa okuKhuselekileyo:
3.Siya kubaxhasi kulo lonke ihlabathi:
Avanafil powder Yonke into omele uyiqonde ngaphambi kokuthenga i-clenbuterol powder
tags: Avanafil powder, I-Avanafil powder yokuthengisa, ukuthenga i-Avanafil powder
Iingcebiso zokusebenzisa i-Dobutramine Raw	I-anti-Obesity powder: Cetilistat powder vs Orlistat powder